Sheet Metal Fabrication, Welding Fabrication, Tube Fabrication - THYH
Isu tinopa High Quality Products
Makomba eMoto eKunze,Gomba reMoto Huni Kupisa Round Star neMwedzi,Fireplace Poker,Spark S...
KUTEVEDZWA KWEKUTANGA: Pese uye kupi kwaunoshandisa moto uyu, kuchengetedzeka kunogara kuri pamberi.Yakasimba mesh dhizaini muchiratidziro uye cutouts inogona kudzivirira zvinobudirira sparks, marasha nemarara kubva pakubhururuka kunze kwemoto. Iyo 30 ″ kaviri kushandisa poker inobvumidza iwe kufambisa huni. kana marasha uye nekusimudza zvakachengeteka mesh skrini.Nezvidziviriro izvi, unogona kunakidzwa zvakachengeteka nekudziya kwegomba redu remoto rinounzwa kwauri. KUYEDZA & KUNOGONA: 30 Inch gomba remoto rakagadzirwa nepamusoro tembiricha poda yakavharwa simbi ndeye ...
Yakanyanya Kushanda Moto Grate Uye Tafura
Vhenekera kunze uye shandura hupenyu hwako hwekuseri kwemba neyakashongedzwa Yepamusoro Kushanda Moto Grate uye Tafura kubva kuTianhua Firepit! Iyi tafura uye bhasikiti yemoto musanganiswa inoita simba repakati pehupenyu hwekunze kwemba. Inoungana mumasekondi, hapana hardware inodiwa: ingoisa iyo gidhi pamusoro petafura, wedzera huni dzako, uye gadzira moto. Murazvo wakavhurika wakareba unopenya nekudzvova pamusoro, ukuwo madota anonetsa achibatwa zvakachengeteka pazasi patafura. Izvi zvinogadzira kuchenesa zvachose ...
31 ″Mhete YeMoto Ine Inogadziriswa Grate
Simudzira ruzivo rwako rwekunze nekusingaperi neTianhua Firepit, hupfu-yakafukidzwa 31 ”Mhete yeMoto ine Adjustable Grate. Iyo intuitive uye yakasarudzika dhizaini ichakurumidza kuzivikanwa nevanofarira kumisasa, asi iko kugadzirika kwegirati kunopa iyi mhete yemoto kumonyoroka kwakangwara. Basa repende rakasviba rinotarisa risingagumi, uye hupfu-hupfu huchadzivirira kutanga ngura uye kuputika - kuve nechokwadi kuti inoramba ichitaridzika zvakanaka kwemakore anouya. Iyo simbi yekuvakwa kwemhete yemoto iyi inenge isingaite ...
42-MuHemisphere Moto Gomba
Wedzera chitarisiko chitsva kuchivanze chako ne42-inch Hemisphere Fire Pit kubva kuTianhua Firepit. Iri gomba remoto rinobata maziso rinogara rakasununguka 20-inches kumusoro uye rakagadzirwa kubva kusimba 0.4-inch gobvu rakakandwa simbi ine yakasikwa patina yerustic, yekushongedza kutaridzika. Iri gomba remoto rakasungirirwa nemaoko, rine gasi rakatenderera, uye 0.7-inch buri rekudonhedza kuti mvura isapinda. Gomba rakakwana rekudziya kuungana kwakakura uye kugocha ako aunofarira emoto. OXIDIZED PATINA PIT: Iyo Hemisphere Fire Pit inogadzirwa kubva isina kupendwa ...
Campfire Asado | Vhura Flame Adjustable Cooking
Inzwa rusununguko rwekuvhurika moto kubika neinogadziriswa Titan Great Outdoors Campfire Asado! Iyo yakavhurika murazvo system ndiyo yakakwana yekuwedzera kuseri kwemba yako kuungana, ingovaka moto pasi pebiki furemu, uye wagona kuenda! Iyo Campfire Asado inouya nezvose zviri zviviri girati yekubika uye griddle inochinjika, pa28 "x 29 1/2". Iyi inokwana 826 square inches yenzvimbo yakavhurika yekubikira! Rusununguko uye kutonga kwakabatana mukubika, ndosaka kureba kwe ...
Anson Simbi Huni Kupisa Moto Pit
Simbisa nzvimbo yako yekunze yekugara neAnson Fire Bowl. Iyo inorema gauge simbi mbiya uye base, inowanikwa muGrey kana Rust inopedzisa, oers inogara ichiita uye yakachena inoyevedza iyo inowedzera kudziya manheru anotonhorera kwemakore anotevera. Inosanganisira spark screen, log poker chishandiso uye vinyl inodzivirira kuchengetedza chivharo. Iyo Anson Fire Bowl inogona kuchinjirwa kuReal Flame Gel cans pamwe nekuwedzera kweiyo Real Flame 2-Can kana 4-Can Outdoor Conversion Log Sets. Inopedza Inowanikwa: Gray (pamusoro, pazasi) Ngura...
38 ″ Gomba reMoto Ine Swivel Grill
Ita kuti manheru ako ekunze asakanganwike nebasa rinorema 38 ”Moto Pit ine Swivel Grill kubva kuTianHua Firepit! Iyo swivel-style simbi grill grate ine isingaite inotsvedza pakurongeka kwayo, uye yakanakira kubika nyama inonaka kana kuchengeta moto uri mukati megomba. Iyo 27 ”Moto Iron chishandiso chinouya chemahara negomba rega rega, uye chinokutendera kuti utarise matanda kana nyore kugadzirisa swivel grate panguva yako yekuzorora. Chitubu chekubata chakasungirirwa kune grate zvakare, kana iwe uchida mamwe maoko-pa appro ...
Iyo Self-Feeding Fire Pit Basket yakagadzirirwa kupisa kwakanyanya kunoreva kuchengetedza huni dzako nekugadzira murazvo wakanyanya nematanda mashoma. Iri gomba rakasimba resimbi rinogadzirwa nemakumbo mana achisimudza tswanda kuitira kufamba kwemhepo kuri nani uye kugadzikana. Haisi chete ichi chibatiso chemoto chinobatika, asi chinobatidza moto wakanaka kupisa kuti unakirwe husiku hwese. Kupisa kwakanyanya-Chengetedza huni nekugadzira moto wakanyanya nematanda mashoma - P...
Iyo Corten Steel Dual-Flame Smokeless Fire Pit kubva kuTianhua Firepit isimbi yakanaka yemamiriro ekunze, iri pedyo-isina utsi yepakati iyo yakanakira kuungana kwemasikati, kubika moto wakavhurika, usimbe hweSvondo manheru, kana chero chiitiko chekunze. Inoratidzira 5/8-inch maburi mumadziro-aviri chimiro chinokwevera mumhepo kubva pasi 3-inch slots uye inopa iyo inopisa oxygen kumusoro. Kufamba kwemhepo uku kunopisa moto pachigadziko chayo uye kunopa kusimuka kwemhepo inopisa kuburikidza nemakomba anobuda pamusoro pe...
Red Painting Steel Metal Fabrication uye Welding Zvikamu
Products Sheet Metal Fabrication,Frameworks, Brackets, Structures, Stands, Tables, Railings, Grills, Racks, Enclosures, Cases, Metal Tools, Fences, etc. Material Mild Simbi, Stainless Simbi, Aluminium Manufacturing process Kucheka kwemoto, Plasma Cutting, Plasma Cutting. (Capacity 1.5m * 6m, nyoro simbi 0.8-25mm, Stainless simbi 0.8-20mm, Aluminium 1-15mm), Bending (25mm Max), Welding (MIG, TIG, Spot Welding, etc.), Punching, Stamping, etc. Pedzisa Galvanizing, Powder Coating, Painting, Dull ...
Tsika Inorema Duty Simbi Mamiriro Akaiswa Welded Zvikamu
Products Sheet Metal Fabrication, Frameworks, Brackets, Structures, Stands, Tables, Railings, Grills, Racks, Enclosures, Cases, Metal Tools, Fences, etc. Material Mild Steel, Stainless Simbi, Aluminium Manufacturing Process Flame Cutting, Plasma Cutting, Laser Cutting. (Capacity 1.5m * 6m, nyoro simbi 0.8-25mm, Stainless simbi 0.8-20mm, Aluminium 1-15mm), Bending (25mm Max), Welding (MIG, TIG, Spot Welding, etc.), Punching, Stamping, etc. Pedzisa Kuisa Galvanizing, Powder Coating, Pendi...
Custom Welding and Fabrication Metal Parts Kubva kuChina Fabrication Factory
Qingdao TianHua YiHe Metal Fabrication Factory iri muguta rakanaka rechiteshi chengarava reQingdao, tine makore makumi maviri ruzivo mukugadzira zvigadzirwa zvesimbi, simbi welding zvigadzirwa.
Isu tinopa tsika yekugadzira simbi mhinduro zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi:inosanganisira prototyping dhizaini dhizaini kushandura, kugadzira,quality control, kurongedza,container kurodha uyeDelivery solution.Yedu kunyanya sevhisi yekugadzira simbi inosanganisira sheet simbi uye kugadzirwa kwechubhu, inosanganisira kucheka simbi (saw, laser, murazvo, plasma), kupeta simbi (kupeta pepa, chubhu / tsvimbo / chikamu bend.ing, tube coiling), kutsika kwesimbi, kudhirowa kwakadzika, CNC punching, welding nekugadzira, kusangana uye kupedzisa kwepamusoro nezvimwe.
Tora chikamu muzviitwa zvekuratidzira
Zviitiko & Nhau
Thyh Metal Fabrication Finishing Services: Kubvisa, Kupolisha uye Kupenda Kubvisa uye kukwenenzvera ndiwo maitiro akakosha ekupedzisa mukugadzira simbi, inodiwa pamberi pedanho rekupedzisira rekupenda. Deburring Deburring inobvisa mabhura anogona kuitika panguva yekugadzira simbi. Kunyangwe maburrs tiri isu ...
MIG uye TIG Welding
Thyhmetalfab sechitoro chakazara-sevhisi yekugadzira simbi, isu tinopa tekinoroji yekuvandudza kubva-ye-ye-iyo-iyo-inodhirowa chubhu laser yekucheka kune ichangoburwa mune welding tekinoroji. MIG Welding Inokodzera zvakasiyana-siyana zvesimbi uye ukobvu, MIG (Metal Inert Gasi) welding inoshandiswa mumaindasitiri uye archite...
TIG welding sheet simbi: yakakwana kupinza mashizha matete
TIG welding inonyanya kukodzera simbi yakatetepa uye inogona kushandiswa kune zvese zvinoenderera uye nzvimbo welding. Dzidza zvakawanda pamusoro pezvimiro zvayo. TIG (Tungsten Inert Gas) welding sheet simbi zvirokwazvo ndiyo imwe yedzakajairika nzira dzewelding. Iyi iarc welding process ine infusible...
Thyhmetalfab simbi yekugadzira uye welding fekitori ine kugona kugadzira zvese zvidiki uye zvakakura zvikamu. Hunyanzvi hwedu hwekugadzira simbi hunosanganisira: Tsika Welding Machining Rolling Steel Kugadzira Kuveura & Kucheka Punching Painting & Blasting Tinogona kuita zvinotevera ...